ठूलाठूला घर, सडक र कारखाना मात्रै बनाएर देश समृद्ध हुने हो र ? - Birgunj Sanjalठूलाठूला घर, सडक र कारखाना मात्रै बनाएर देश समृद्ध हुने हो र ? - Birgunj Sanjalठूलाठूला घर, सडक र कारखाना मात्रै बनाएर देश समृद्ध हुने हो र ? - Birgunj Sanjal
ठूलाठूला घर, सडक र कारखाना मात्रै बनाएर देश समृद्ध हुने हो र ?
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १६:४५
काठमाडौं । संस्कृति विद् सत्यमोहन जोशीले नेपाली लोक साहित्य र लोक संगीतको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भौतिक विकास मात्रै विकास नभएको भन्दै देशको लोक कला तथा संगीतको संरक्षण तथा उत्थान पनि सँगसँगै हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
लोक साहित्य र संस्कृतिको इतिहासमा ‘नेपाल लोक स्टार’ जस्तो वृहद् कार्यक्रम कहिले पनि नभएको भन्दै उनले भने, “यति ठूलो पुरस्कार राखेर कहिले पनि कार्यक्रम भएको थिएन । यसलाई संगीत प्रतिष्ठान र संस्कृति मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।”
संगीत प्रतिष्ठान र संस्कृति मन्त्रालयले लोक संगीतमा रहेका कलाकारका लागि विचार गर्नुपर्ने जोशी बताउँछन् । भएका कला र संस्कृतिलाई बचाउन सके देशको इतिहास बन्ने र राष्ट्र नै समृद्ध बन्ने उनको भनाइ छ ।
“देशमा ठूलाठूला घर, सडक र कारखाना मात्रै बनाएर समृद्ध हुने हो र ?,” जोशी भन्छन्, “बब डिलनले संगीतमा नोबेल पुरस्कार पाए पछि संगीत जगत नै अहिले धपक्कै बलेको छ । नेपालको संगीत हुँदाहुँदै यसलाई संरक्षण गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ ।”
बिहीबार उनी मौलिक रियालिटी शो ‘नेपाल लोक स्टार’का प्रतिस्पर्धीलाई हौसला दिन पुगेका थिए ।